Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Sami al-Uraydi
Saami al-Uraydi waa mas’uul sare ee shareecada oo u ah Hurras al-Din (HAD). Al-Uraydi wuxuu horey ugu lug lahaa shirqoolo argagixiso oo ka dhan ahaa Mareykanka iyo Israel. Al-Uraydi wuxuu xubin ka yahay shuurada HAD, waa kooxda sare ee uqaabilsan go’aan gaarista ururka. Al-Uraydi wuxuu ahaa sarkaalka sare ee shareecada u qaabilsan ururka Jabhadda ee al-Nusrah ee sannadihii 2014-kii illaa 2016-kii, wuxuuna kooxda ka tagay sanadkii 2016.
Hurras al-Din waa koox xiriir la leh ururka al-Qaacida oo ka soo ifbaxday wadanka Suuriya horaantii sanadkii 2018 kadib markii dhowr urur ay ka soo goosteen ama ay kala jajabeen ururka Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Hogaanka HAD, oo uu ku jiro al-Uraydi wali wuxuu daacad u yahay ururka AQ iyo hogamiyahooda, Ayman al-Zawahiri.
Halka uu ku Dhashay:
Abu Maxmuud al-Shami, Sheikh Dr. Sami al-Uraydi
Kooxaha Argaggixisada ee Hore:
Al-Qaacida, Jabhada Al-Nusrah
Koox Argaggaxiso Loo Idmatay:
Wasaarada Arimaha Dibadda SDGT: 10 ka Sitembar, 2019